Inguqulelo yeShishini ye-Galaxy S10 kunye ne-S10e esungulayo eSpain | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Sele kudlule iinyanga ezimbini kancinci Uluhlu lweSamsung yeSamsung yaziswa ngokusemthethweni. Uphawu lwaseKorea lusishiyile ngeefowuni ezintathu kolu luhlu. Kwisiqhelo se-S10 kunye ne-S10 +, esihlala sinayo minyaka le, ijoyine i-Galaxy S10e, isixhobo esifikelela kwinqanaba eliphakathi kuluhlu lwenkampani yaseKorea. Inkampani ngoku ibhengeza ukumiliselwa kwenguqulelo entsha yezi fowuni.
Luhlobo olubizwa ngokuba lushicilelo lweshishini, eluhlobo lweshishini lwezi modeli. Bayinxalenye yeli phulo likaGoogle lokwazisa iifowuni zeshishini, apho sibona khona Iimodeli ezininzi ezineenguqulelo eziguqulweyo. Injalo imeko yale Galaxy S10, eyazisa ezinye izinto kubathengi beshishini.
Kule meko yiGPS S10 kunye neGPS S10e, enolu hlobo lweenkampani. Ukuchazwa kweefowuni ezimbini kuhlala kunjalo, kodwa utshintsho oluthile lwenziwe ngohlobo lwezinto ezongezelelweyo. Ngaphezu kwako konke ukhuseleko olukhulu kunye nezinye iindlela zokwenza ngokwezifiso, ukuziqhelanisa neemeko zeshishini.
Esinye sezixhobo ezibaluleke kakhulu yi-Samsung Enterprise Firmware Ngaphezulu Komoya (E-FOTA). Ngale ndlela, enkosi kwesi sixhobo, amasebe e-IT eenkampani aya kuba nakho ukubanakho ukulawula uhlaziyo lokhuseleko kunye namabala ngalo lonke ixesha emnxebeni. Ikuvumela ukuba ugcine ifowuni yakho ihlala ikhuselekile.
Umbono kukuba nakho ukuhlengahlengisa le Galaxy S10 ukuze isetyenziswe kwiinkampani. Ikwaziswa kwi-Samsung Knox Configure efanayo, evumela ukuba izixhobo zibe kude kwaye zilungiselelwe ngokuzenzekelayo, kuxhomekeke kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye. Ikwabonelela ngokubakho kokubandakanya uphawu lwenkampani kwisixhobo, ukuyenza ngokwezifiso zakho ngale ndlela.
Ezi nguqulelo zeshishini zeGPS S10 sele zithengiswa eSpain. Iinkampani ezinomdla zinokunxibelelana neSamsung ukumisela amanqaku eziwafunayo, anokubangela ukuba ixabiso litshintshe. Unokwazi ngakumbi ngayo kwiwebhusayithi yenkampani yaseKorea.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isamsung isungula uhlobo lweshishini lweGPS S10 kunye neS10e